बिहे गर्न केटि छा’न्दै हुनुहुन्छ? यस्ता ११ चिह्न भएकी युवतीले चम्का’उनेछन् तपाईंको भाग्य! – Life Nepali
बिहे गर्न केटि छा’न्दै हुनुहुन्छ? यस्ता ११ चिह्न भएकी युवतीले चम्का’उनेछन् तपाईंको भाग्य!
एजेन्सी। केही तथ्य र रो’चक कुराहरु शास्त्रमा उल्लेख गरिएका पाइन्छन् । शास्त्रले बताए अनुसार महिलामा केही त्यस्ता संकेत वा चिन्हहरु भएमा उनीहरु पुरुषका लागि भाग्यमानी सावित हुन्छन् । यस्ता युवतीसँगको विवाह वा संगतले नै तपाईको भाग्य चम्किेने विश्वास गरिन्छ । त्यस्ता कन्या विवाहपछि घर भित्रिँदा हरेक पुरुषको भाग्य खुल्छ र घरमा लक्ष्मीको बास हुने शास्त्रमा लेखिएको छ । त्यस्ता संकेत के–कस्ता छन्–
(१) कान तथा ओठमा कोठी छ भने त्यस्ता कन्या भाग्यामानी र सुशिल हुन्छन् । (२) पैतालाको बूढी औंला गोलो, उठेको तथा मोटो छ भने त्यस्ती कन्याका शुभ हुनेछ । (३) यदि कन्याका हात लामा लामा छन् भने त्यसलाई पनि शुभ मानिन्छ । (४) कन्याको नाभी गहिरो छ भने पनि शुभ मानिन्छ । (५) हातका नंग पातला भएमा पनि कन्याहरुका लागि शुभ मानिन्छ ।
(६) आँखाको तल्लो भाग हल्का सेतो र कान रातो रातो छ भनेपनि यस्ती कन्यासँग संगत गर्दा शुभ हुन्छ । (७) कन्याको पैताला समतल छ भने पनि यसलाई शुभ मानिन्छ । (८) यदि शिर अलिकति अघिल्तिर उठेको छ भने पनि यसलाई शुभ मानिन्छ । (९) निधारको ठिक बिच भागमा कोठी छ भने पुरुषहरुका लागि यस्ता महिला शुभ मानिन्छन् । (१०) समुद्रशास्त्रका अनुसार चिल्लो तथा रातो जिब्रो भएकी कन्या पनि पुरुषका लागि भाग्यमानी मानिन्छन् । (११) कन्याको छोटो ग’र्धन पनि शुभ मानिन्छ ।
Previous पुसको ठण्डीमा ह’ट नाइका साम्राज्ञी छोटो पहिरनमा’
Next साउदीमा पसिना बगाएर कमाएको धन सम्पति कु’म्ल्यार श्रीमती फ’रार, श्रीमान रु’दै मिडियामा’